မီးကွင်းပစ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုက်ဝါးတွေ နှင့် အဓိကအချက်ကို မမေ့သင့်တဲ့ ပြည်သူတွေ – သုတရသ
မီးကွင်းပစ်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုက်ဝါးတွေ နှင့် အဓိကအချက်ကို မမေ့သင့်တဲ့ ပြည်သူတွေ..
မီးကွင်းပစ်တယ်၊ ပစ်ပစ်ခြင်း ချက်ခြင်းမလောင်ပါဘူး၊ လူအားနဲ့ ငြိမ်းနိုင်လောက်ပါတယ်။ ပစ်လား၊ ဟုတ်လား? ဟုတ်မှဖမ်းပါ၊ ရပ်ကွက်ထဲ လူထောင်ချီနေတာ မီးကွင်း ဖြစ်ဖြစ် သူခိုး ဖြစ်ဖြစ် ဓါးပြ ဖြစ်ဖြစ် မလွယ်လှပါဘူး။ ကျွန်တော်သာ ဓါးပြဆိုရင် ဒီလို ညမျိုး မာဆပ်သွားအိပ်နေမှာ၊ အလုပ်ဆင်းလို့ကောင်းတဲ့နေ့ မဟုတ်ဘူး၊
လူကောင်းတောင် မှားအရိုက်ခံရမှာကြောက်နေရတဲ့အချိန်၊ ဒီလိုနေ့မျိုး အလုပ်ဆင်းလို့ကတော့ YBS ပေါ်ကအဆင်း ရပ်ကွက်ထဲအဝင် တင် အသက်ပါသွားနိုင်တယ်။ မီးကွင်းပစ်ဖို့ ဘဏ်တိုက်တတိုက်လုံးက ငွေပုံပေးမယ် သွားလုပ်ဆိုလည်း မလုပ်ဘူး၊ အသက်က နှစ်ချောင်းမပါဘူး။ ဒါတွေက စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတာပါဆိုတာသိရဲ့သားနဲ့
ဟိုလိုက် ဒီလိုက် ဟိုပြေး ဒီပြေး.. ပင်ပန်းတာပေါ့ဗျာ။ ခက်တာက အွန်လိုင်းပေါ်လည်း ထုတ်ပြန်ချက်အမျိုးမျိုး နဲ့.. ပြည်သူက လန့်ပြီး ပန်းကုန်တာပေါ့။ တနေရာ နှစ်နေရာ သူခိုး ဓါးပြ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ် ပွ၊ ထ ပြီး သန်း ၅၀ လုံး ထုတ်စီးထိုး နေရတာတော့ ကျွန်တော်တို့ လန့်တာ နဲနဲများသွားပြီ။
တပ်ဆိုတာ ရန်သူနဲ့ အမြဲတိုက်ဖို့ အမြဲပြင်နေရတာ၊ အဲ့ဒါသူတို့အလုပ်ပါပဲ၊ သူတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပဲ၊ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးတပ်ဆိုတာအဖွဲ့ကို သပ်သပ်ရှိသေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးက အစ ပဲရှိသေးတယ်၊ သေနတ်တောင်မိုးပေါ်ထောင်မပစ်သေးဘူး။ သန်း ၅၀ လုံး တည တည
ဒီလောက် ခြောက်ခြားနေတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ တောင့်တောင့်တင်းတင်းလူငယ် ၁၀ ယောက်လောက် နဲ့ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက် စောင့်ပေးရင် လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်သေချာမှ သူတို့ခေါင်းဆောင်မှုနောက် ဝိုင်းကြပေါ့။ အခုတကယ် ပြဿနာတက်နေတာက CDM နဲ့ လမ်းပေါ်က ဆန္ဒပြပွဲတွေပါ။ အဲ့ဒါတွေက အဓိကပါ။ ရပ်ကွက်လန့်တာတွေက ဆိုက်ဝါး..
မီးကှငျးပဈတယျ၊ ပဈပဈခွငျး ခကျြခွငျးမလောငျပါဘူး၊ လူအားနဲ့ ငွိမျးနိုငျလောကျပါတယျ။ ပဈလား၊ ဟုတျလား? ဟုတျမှဖမျးပါ၊ ရပျကှကျထဲ လူထောငျခြီနတော မီးကှငျး ဖွဈဖွဈ သူခိုး ဖွဈဖွဈ ဓါးပွ ဖွဈဖွဈ မလှယျလှပါဘူး။ ကြှနျတျောသာ ဓါးပွဆိုရငျ ဒီလို ညမြိုး မာဆပျသှားအိပျနမှော၊ အလုပျဆငျးလို့ကောငျးတဲ့နေ့ မဟုတျဘူး၊ လူကောငျးတောငျ
မှားအရိုကျခံရမှာကွောကျနရေတဲ့အခြိနျ၊ ဒီလိုနမြေို့း အလုပျဆငျးလို့ကတော့ YBS ပျေါကအဆငျး ရပျကှကျထဲအဝငျ တငျ အသကျပါသှားနိုငျတယျ။ မီးကှငျးပဈဖို့ ဘဏျတိုကျတတိုကျလုံးက ငှပေုံပေးမယျ သှားလုပျဆိုလညျး မလုပျဘူး၊ အသကျက နှဈခြောငျးမပါဘူး။ ဒါတှကေ စိတျဓါတျစဈဆငျရေးလုပျနတောပါဆိုတာသိရဲ့သားနဲ့ ဟိုလိုကျ ဒီလိုကျ ဟိုပွေး ဒီပွေး.. ပငျပနျးတာပေါ့ဗြာ။
ခကျတာက အှနျလိုငျးပျေါလညျး ထုတျပွနျခကျြအမြိုးမြိုး နဲ့.. ပွညျသူက လနျ့ပွီး ပနျးကုနျတာပေါ့။ တနရော နှဈနရော သူခိုး ဓါးပွ ရှိကောငျးရှိနိုငျပါတယျ။ အှနျလိုငျးပျေါ ပှ၊ ထ ပွီး သနျး ၅၀ လုံး ထုတျစီးထိုး နရေတာတော့ ကြှနျတျောတို့ လနျ့တာ နဲနဲမြားသှားပွီ။ တပျဆိုတာ ရနျသူနဲ့ အမွဲတိုကျဖို့ အမွဲပွငျနရေတာ၊
အဲ့ဒါသူတို့အလုပျပါပဲ၊ သူတို့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပဲ၊ စိတျဓါတျစဈဆငျရေးတပျဆိုတာအဖှဲ့ကို သပျသပျရှိသေးတယျ၊ သူတို့ရဲ့စိတျဓါတျစဈဆငျရေးက အစ ပဲရှိသေးတယျ၊ သနေတျတောငျမိုးပျေါထောငျမပဈသေးဘူး။ သနျး ၅၀ လုံး တည တည ဒီလောကျ ခွောကျခွားနတော ပငျပနျးပါတယျ။
တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးလူငယျ ၁၀ ယောကျလောကျ နဲ့ အမြှျောအမွငျရှိတဲ့ ခေါငျးဆောငျတယောကျ စောငျ့ပေးရငျ လုံလောကျမယျထငျပါတယျ။ တကယျသခြောမှ သူတို့ခေါငျးဆောငျမှုနောကျ ဝိုငျးကွပေါ့။ အခုတကယျ ပွဿနာတကျနတောက CDM နဲ့ လမျးပျေါက ဆန်ဒပွပှဲတှပေါ။ အဲ့ဒါတှကေ အဓိကပါ။ ရပျကှကျလနျ့တာတှကေ ဆိုကျဝါး..
Gen Z တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက် (၅) ချက်